कोरोना बिरामीले भरिए पोखरा अस्पताल | Supremekhabar
कोरोना बिरामीले भरिए पोखरा अस्पताल
२०७८ साउन २६, मङ्लबार, ८: ०८PM
पोखरा । पछिल्लो एक सातामा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढपछि पोखराका अस्पताल फेरि भरिभराउ हुन थालेका छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालमा संक्रमितले वेड नपाउने अवस्था आएको छ ।
पछिल्लो साता संक्रमितको संख्या नपत्याउँदो गरी बढेकाले आईसीयूमा भर्ना हुन आएका संक्रमितले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. शरद बराल बताउँछन् । अस्पतालमा कोभिड १९ का बिरामीका लागि ८० बेड छुट्याइएको छ । तर सबै बेडमा बिरामी छन् । ‘पालो कुरेर पनि उपचार नपाउने स्थिति आइसक्यो,’ डा. बराल भन्छन्, ‘गम्भीर प्रकृतिका बिरामी धेरै छन् । बेलैमा ध्यान नदिए झन् स्थिति भयावह बन्छ ।
अघिल्लो लेखमाकसैसँग शीर निहुर्‍याएर सम्झौता गरिदैन : नेपाल
अर्को लेखमासरकारको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुग्यो, ओली सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको आरोप